မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၅)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
NOTICE Under Section 206 (1) Myanmar Companies Act ( TS ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ) ( Members Voluntary Winding - Up )၊ ကေပီအိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (K P I COMPANY LIMITED) အစုရှင်များ၏ဆန္ဒအရ စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းပြီးစီးခြင်း၊ ရုလီ ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (RUILI MANUFACTURING COMPANY LIMITED)နှင့် အာရှတခေတ်ဆန်း ခရီးသွား လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ASIA RENAISANCE TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၄)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
ပန်းတိုင်ရလဒ်များ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Destination Solutions Travel & Tours Co.,Ltd.) အလိုအလျောက် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ရရန်ရှိသည့်ကြွေးများတောင်းခံရန် သတိပေးခြင်း၊ IN THE MATTER OF THE MYANMAR COMPANIES ACT AND TOYO LOGISTICS (S) PTE. LTD. (YANGON BRANCH) NOTICE FOR VOLUNTARY WINDING UP UNDER SECTION 206 (1) & CLAIMS NOTICE၊ FINAL NOTICE Commencement of Winding up to the AFFAIRS HIKARU TSUSHIN COMPANY LIMITED (Yangon Branch In Liquidation)၊
မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၃)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
TRAVELLING DRAGON CO., LTD. ဖျက်သိမ်းရန်ကြော်ငြာချက်၊ ကိုကိုဖယ်မလီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (KO KO FAMILY COMPANY LIMITED)၊ ဘဏ္ဍာစိုးအုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် (STEWARD GROUP COMPANY LIMITED)၊ အာရှစီးပွားရေး ကွန်(မ်) ပတ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ASIA BUSINESS COMPASS COMPANY LIMITED)၊
မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၂)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
Century Land Development Co., Ltd.၊ Grand Peninsular Co., Ltd.၊ The Strand Trading Co., Ltd.၊ Integrated Medical Leadership Co., Ltd. တို့၏ ကုမ္ပဏီစာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်၊ RISING TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED နှင့် TEL ME COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၁)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
ဧမြတ်သူ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ပိစ် မြန်မာ ဟိုးလ်ဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အာရှ ဘတ်(စ်) လင့် (ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ရွှေငွေရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ELECTRUM TRADING COMPANY LIMITED)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တမ်း အတွဲ (၇၀)၊ အမှတ် (၁၀)၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်ထုတ် စာစောင်ကို စာပေဗိမာန် စာအုပ် အရောင်းဆိုင်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
ဒဏ္ဍာရီ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် (LEGEND ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED)၊ လှဝင်းရွှေစင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (HLA WIN SHWE SIN COMPANY LIMITED) နှင့် ဘရီး(ဇ်)မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (BREEZE MYANMAR COMPANY LIMITED.) တို့၏